पोखरामा देखा पर्यो घातक पुतली : उपचारमा ढिलाइ गरे आँखाको ज्योती गुम्ने ! - खबरदार न्युज
आँखामा सेतो पुतलीको झुस बिजेर रातो र सुनिएका करिब २० जना बिरामीहरु हिमालय आखाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको नेत्र विशेषज्ञ डा. महर्जनले जनाए ।आखाँ रातो र सुनिएको अबस्थामा जति सक्दो छिटो आँखा अस्पतालमा गएर उपचार गर्दा निको हुने उनले जनाए । आखाँमा पिप परेको अबस्थामा आखाँमा सुई लगाउने र आखाँको अप्रेसन गर्ने दुई ढंगबाट उपचार गर्न सकिने भएको डा. महर्जनले जनाए ।
सेतो पुतली संक्रमणले कालो आँखाको भागमा सेतो देखिनु जहाँ ब्याक्टेरिया समेत देखिने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। उनले भने “ आँखामा एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन लगाउँदा आँखामा जमेको पिप हटाउन र ज्योति बचाउन सकिन्छ । ” सेतोपुतलीको रियाक्सनले समयमै उपचार हुन नसके आँखाको रेटिना सहितको भाग नै नष्ट पार्ने डा।महर्जनले दाबी छ ।
यस्तो संक्रमणबाट बचाउन सबै सरोकारवाला निकाय सजग हुन डा. मर्हजनले आग्रह गरे ।
Previous post १४ बर्षिया बालिकाको दुई दिनसम्म सामुहिक बला-त्कार: १६ जना अभियुक्त पक्राउ।
Next post एमसीसीबारे काँग्रेस-एमाले नेताका यस्ता तर्क
Previous post:१४ बर्षिया बालिकाको दुई दिनसम्म सामुहिक बला-त्कार: १६ जना अभियुक्त पक्राउ।
Next post:एमसीसीबारे काँग्रेस-एमाले नेताका यस्ता तर्क